Fiarovana amin'ny tontolon'ny Omni-Channel
Ahoana ny fomba hisorohana ny delestazy eto amin'ity tontolo Omni-Channel ity
Nanapa-kevitra i Google fa ao anatin'ny iray andro dia 90% amin'ireo mpanjifa no mampiasa efijery marobe mba hanomezana fahafaham-po ny filan'izy ireo amin'ny Internet toy ny banky, ny fiantsenana ary ny famandrihana fitsangatsanganana ary antenain'izy ireo fa hijanona ho azo antoka ny angon-drakitra rehefa mitsangantsangana hatrany amin'ny sehatra iray izy ireo. Amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ho laharam-pahamehana indrindra, ny fiarovana sy ny fiarovana ny angon-drakitra dia mety hianjera amin'ireo triatra. Araka ny voalazan'i Forrester, 25% amin'ireo orinasa no niaina fanitsakitsahana goavana tao anatin'ny 12 volana. Any Etazonia fotsiny tamin'ny 2013, ny vidin'ny fandikana data dia 5.4 tapitrisa dolara.
Ao amin'ny sary eto ambany, Identity Ping mampiseho amintsika ny fiovan'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny andrasana, ny fiatraikany amin'ny teknolojia fandraharahana, ary ny anjara asa lehibe ilain'ny filaminana raha ny amin'ny fanomezana ny traikefa farany ho an'ny mpanjifa. Araho ny torohevitr'izy ireo mba hiantohana fa afaka mijanona ho azo antoka sy azo antoka ny angon-drakitra mpanjifanao.
Tags: e-varotrae-antsinjaranyecommerceSary torohayÔmnia-fantsonaomnichannelmaha-izy ny pingantsinjaranysecurity
Tsy mandeha ny haino aman-jery satria tsy fahampian'ny finoana irery